Ciidamada Puntland oo howlgal fuliyay | KEYDMEDIA ONLINE
BOOSAASO, Soomaaliya - Ciidamada Puntland ayaa waxay ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen dhulka buuraleyda ah ee Gobolka Bari, halkaas oo mararka qaar ay weeraro kasoo qaadaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaallanta geeska Afrika.
Howlgallada ayaa waxaa la sheegay in sigar ah looga sameeyay dhulka Buuraha ah ee Cal-miskaad iyo Calmadow, halkaas oo ah xarumaha ugu waaweyn ee kooxda Al-Shabaab. Waxaa la tilmaamay in goobihii ugu weeynaa ee Al-Shabaab & Daacish ay hubka iyo Agabka kale ay ku xareysan jireen la weeraray.
Wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahiyay weerarka ay ciidamada Puntland ku qaadeen dhulka buuraha ee ka tirsan gobolka Bari, waxa uuna sheegay in halkaasi laga fuliyay howlgal lagu guuleystay, sida markii hore loo qorsheeyayna u dhacay.
Puntland ayaa la daalaa dhacaysa iska caabinta weerarrada kaga yimaada kooxaha Argagaxisada ee Al-Shabaab iyo Daacishta Soomaaliya oo fara ba'an ku haya degaanno ka tirsan maamulka Puntland, dhawaan ayey ahayd markii la xukumay 17 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo dhibaato ka geysan jiray dhulka ay puntland maamusho gaar ahaan gobollada Bari, Nugaal iyo Mudug.
Howlgallada nuucan oo kale ah haddii ay sii wadaan ciidamada Puntland waxaa laga gaari guulo waa weyn, sababtoo ah kooxaha ku-dhufo oo ka-dhaqaaqda ah waxay gabbaad ka dhigtaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari, markii weerar lagu qaado ee ay horay ugu sii siqaan buuraha waa weyn ayey ciidamadu dib uga soo laabtaan.